1 Kronike 12 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Kronike 12:1-40
12 Ngabo aba abeza kuDavide eTsikelage+ ngoxa wayesavalelekile ngenxa kaSawule+ unyana kaKishe; babephakathi kwamadoda anamandla,+ abancedisi emfazweni, 2 bexhobe ngesaphetha,+ besebenzisa amatye+ okanye isaphetha neentolo+ ngesandla sasekunene nesandla sasekhohlo.+ Babengabakubazalwana bakaSawule wakwaBhenjamin. 3 Intloko yayinguAhiyezere noYowashe oonyana bakaShemaha umGibheya,+ noYeziyeli noPelete oonyana baka-Azimaveti,+ noBheraka noYehu umAnatoti,+ 4 noIshmaya umGibheyon,+ indoda enamandla phakathi kwangamashumi amathathu+ neyayiphethe amashumi amathathu; noYeremiya noYahaziyeli noYohanan noYozabhadi umGedera,+ 5 uEluzayi noYerimoti noBheyaliya noShemariya noShefatiya umHarifi, 6 uElikana noIshiya noAzareli noYowezere noYashobheyam, amaKora,+ 7 noYowela noZebhadiya oonyana bakaYeroham waseGedore. 8 Yaye kwakukho amaGadi athile azahlula aba ngakwicala likaDavide kwindawo ekunzima ukuyifikelela entlango,+ amakroti, amadoda anamandla, amadoda omkhosi alwa imfazwe, awayehleli egcine ikhaka elikhulu nencula zilungile,+ ubuso bawo bubobeengonyama,+ nawayengathi ngamabhadi ezintabeni ukukhawuleza kwawo.+ 9 UEtsere wayeyintloko, uObhadiya engowesibini, uEliyabhi engowesithathu, 10 uMishmana engowesine, uYeremiya engowesihlanu, 11 uAtayi engowesithandathu, uEliyeli engowesixhenxe, 12 uYohanan engowesibhozo, uElzabhadi engowesithoba, 13 uYeremiya engoweshumi uMakebhanayi engoweshumi elinanye. 14 Abo yayingoonyana bakaGadi,+ iintloko zomkhosi. Oyena mncinane wayelingana nekhulu, oyena mkhulu newaka.+ 15 Ngabo abo bayiwelayo iYordan+ ngenyanga yokuqala ngoxa yayiphuphuma kuzo zonke iindonga zayo,+ baza babagxotha bonke abo babesezintilini, empuma nasentshona. 16 Bambi boonyana bakaBhenjamin nabakaYuda baya kufikelela kwindawo ekunzima ukuyifikelela,+ kuDavide. 17 Waphuma uDavide waya kubo waza wabaphendula wathi: “Ukuba niza kum ninoxolo+ ukuza kundinceda, intliziyo yam iya kumanyana nani.+ Kodwa ukuba nize kundingcatsha kwiintshaba zam kungekho bubi kwintende yam,+ makakubone oko uTHIXO+ wookhokho bethu aze akulungise.”+ 18 Umoya+ wamgubungela uAmasayi, intloko yabo bangamashumi amathathu, wathi: “Singabakho, Davide, singakuwe,+ nyana kaYese. Uxolo, uxolo malube nawe, kunye nalowo ukuncedayo, Kuba uThixo wakho ukuncedile.”+ Ngoko wabamkela uDavide waza wababeka phakathi kweentloko zabaphumi-mkhosi.+ 19 Kwakukho athile akwaManase aqhweshayo aya kuDavide ngoxa yena namaFilisti+ baya kulwa noSawule edabini; kodwa akawancedanga, kuba iinkosi ezimanyeneyo+ zamaFilisti zagqiba ekubeni zimndulule, zisithi: “Oku kukubeka esichengeni iintloko zethu kuba uya kusuke aqhweshe aye kwinkosi yakhe uSawule.”+ 20 Ke ekuyeni kwakhe eTsikelage+ baqhwesha baya kuye abakwaManase, uAdenahi noYozabhadi noYediyayeli noMikayeli noYozabhadi noElihu noTsiletayi, iintloko+ zamawaka akwaManase. 21 Bona ke, bancedisana noDavide kumatutu,+ ngenxa yokuba onke ayengamadoda anamandla+ nanobukroti, aza aba ziintloko zomkhosi; 22 abantu baqhubeka besiya+ kuDavide imihla ngemihla ukuze bamncede, de yaliqela elikhulu,+ njengeqela likaThixo.+ 23 Ngawo la amanani eentloko zabo babexhotyiselwe umkhosi abeza kuDavide eHebron+ ukuba banikele kuye ubukumkani+ bukaSawule ngokomyalelo kaYehova.+ 24 Oonyana bakaYuda ababethwala ikhaka elikhulu nencula babengamawaka amathandathu anamakhulu asibhozo, awayexhotyiselwe umkhosi. 25 Koonyana bakaSimeyon amadoda anamandla nanobukroti omkhosi ayengamawaka asixhenxe anekhulu. 26 Koonyana bamaLevi ayengamawaka amane anamakhulu amathandathu. 27 UYehoyada wayeyinkokeli+ yoonyana baka-Aron,+ yaye wayenamawaka amathathu anamakhulu asixhenxe kuye. 28 NoTsadoki,+ umfana onamandla nolikroti, nabendlu yookhokho bakhe, babeziintloko ezingamashumi amabini anesibini. 29 Koonyana bakaBhenjamin,+ abazalwana bakaSawule,+ ayengamawaka amathathu, de kube ngoko amaninzi ngakumbi kuwo ayehleli elinde ngokungqongqo indlu kaSawule. 30 Koonyana bakaEfrayim ayengamashumi amabini amawaka anamakhulu asibhozo, amadoda anamandla nanobukroti,+ amadoda adumileyo, ngendlu yookhokho babo. 31 Esiqingatheni sesizwe sakwaManase+ kwakukho ishumi elinesibhozo lamawaka atyunjwa ngamagama ukuya kwenza uDavide ukumkani. 32 Yaye koonyana bakaIsakare+ ababenolwazi lokuqonda amaxesha+ ukuze kwaziwe oko uSirayeli wayemele akwenze,+ zazingamakhulu amabini iintloko zabo, yaye zazibayalela bonke abazalwana bazo. 33 KwaZebhulon+ lawo ayephuma umkhosi, esakha uluhlu edabini ngazo zonke izixhobo zemfazwe, ayengamashumi amahlanu amawaka, yaye ekubuthelaneni ndawonye kuDavide ayengenantliziyo imbaxa. 34 KwaNafetali+ yayiziintloko eziliwaka, yaye kunye nazo kwakukho amashumi amathathu anesixhenxe amawaka awayephatha ikhaka elikhulu nomkhonto. 35 KwaDan lawo akha uluhlu edabini ayengamashumi amabini anesibhozo amawaka anamakhulu mathandathu. 36 Kwa-Ashere+ lawo ayephuma umkhosi owakha uluhlu edabini ayengamashumi amane amawaka. 37 Phesheya kweYordan+ kwaRubhen nakwaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase nazo zonke izixhobo zomkhosi wokulwa ayelikhulu elinamashumi amabini lamawaka. 38 Onke lawo yayingamadoda emfazwe, abuthelana ndawonye kwizintlu zedabi; aya eHebron ngentliziyo epheleleyo+ ukuya kumenza uDavide ukumkani kuSirayeli wonke; yaye wonke uSirayeli owasalayo wayenentliziyo enye yokumenza uDavide ukumkani.+ 39 Aqhubeka enoDavide apho iintsuku ezintathu, esidla esela,+ kuba abazalwana bawo babewalungiselele. 40 Kwanabo babekufuphi nabo, ukufikelela eIsakare+ nakwaZebhulon+ nakwaNafetali,+ babesizisa ukutya ngamaesile+ nangeenkamela nangeemeyile nangeenkomo, izinto ezidliwayo zomgubo,+ izicumba zamakhiwane+ izicumba zerasintyisi+ newayini+ neoli+ neenkomo+ nezimvu+ ngobuninzi, kuba kwakukho imihlali+ kwaSirayeli.
1 Kronike 12